Nyaya yeZita reMDC Yonzwikwa Mudare reDzimhosva
VaMuzhuzha vanonzi vari kuda kuti MDC ivacherechedze semuridzi wezita rebato iri
WASHINGTON DC — Nyaya yakakwidzwa mudare repamusoro nemumwe murume wemuHarare ane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa, VaDavid Muzhuzha, achida kuti bato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai rimubhadhare mari inoita mazana matatu ezviuru zvemadhora yapinda mudare repamusoro.
VaMazhuzha vanoti mari iyi ndeyekushandisa kwavati kuri kuitwa zita rekuti Movement for Democratic Change, iro vanoti ndivo vakarifunga.
VaMuzhuzha, kuburikidza nemagweta avo eMandizha and Company, vanonzi vari kuda kuti bato iri rivabhadhare mari iyi ichibva pakavambwa bato iri muna 1999.
Asi mutauriri webato reMDC T, VaDouglas Mwonzora, avo vanowe mumwe wevanhu vakakwirirwa dare, vanoti zita rebato iri rakabva kune imwe nhengo yebato iri, Muzvare Grace Kwinjeh, avo vakapiwa mubairo wekuuya nezita rebato iri.
VaMwonzora vanoti VaMuzhuzha havana kumbobvira vave nhengo yebato ravo uye panguva yavanoti vakafunga zita rebato iri vaitove mushandi wesangano revashandi reZCTU.
Vanotiwo paive nekomiti yakaumbwa yekutsvaga zita rebato iyo yakazosarudza rakanga rabva kuna Muzvare Kwinjeh. Vatiwo VaMuzhuzha vatadza kuburitsa humbowo hunoratidza kuti ndivo vakafunga zita iri pavanzi vaite izvi mudare.
MDC T iri kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg.
Studio 7 haina kukwanisa kubata VaMuzhuzha, kanawo magweta avo kuti tinzwewo divi ravo.
Mune imwewo nyaya, dare remakurukota reMDC T, shadow cabinet, rasangana muHarare kuti rikurukure nezvematambudziko akatarisana nenyika uye kuti bato iri ringaenderere mberi sei nekushanda nevana veZimbabwe.